Betfair dia niorina tamin'ny 2000 ary nanomboka teo dia nanolotra an'i Paris ny fanatanjahan-tena, any amin'ny ankamaroan'ny firenena. Ankehitriny dia izy no fifanakalozana fifanakalozana lehibe indrindra any Paris.
Hatramin'ny namoronana azy, miorina ao Londres ary voasoratra ao an-drenivohitra Britanika. na izany aza, tamin'ny febroary 2016 ho an'ny vary, izay miorina ao Dublin hiaraka.
Any Espaina, ny fitantanana marina ny fahazoan-dàlana mihazona ara-dalàna Betfair.
Betfair – FANAZAVANA SY FANAMARIHANA
Betfair no fonenan'ny anglisy monina any Paris, dia manolotra fahafahana lehibe sy rafitra iray izay fifanakalozana lehibe sy faran'izay be mpahalala fantatra eran-tany amin'ny Paris Stock Exchange Betfair. Izy no mpamorona boky lehibe indrindra ao Angletera ary lasa iray amin'ireo tsara sy manaja indrindra an'izao tontolo izao, koa any Espana.
Any Miscasasdeapuestas dia tena zatra an'io pejy io ny Paris, ary maro koa ireo avy any Betfair. Ho fanampin'ireo lafin-javatra tsara maro, misy ihany koa ny fatiantoka izay efa nariantsika hita taratra amin'ity famakafakana atolotray ity.
Ny zava-misy fa i Betfair dia iray amin'ireo nankafizantsika dia zavatra azon'ny mora takarina raha mijery ny fizarana fanatanjahantena any Paris ianao, izay ahitanao ireo misongadina rehetra momba ny andiany teo aloha sy ny vidin'ny kalitao mitovy amin'ny sokajy rehetra amin'ny baolina kitra kilasy.
Ny vokatra mampiavaka azy sy kintana dia tsy isalasalana, ny rafitra lanjan'i Paris – Fifanakalozana Betfair – Ankoatra ny voalohany miditra ao an-tsena, dia mbola izy no lehibe sy tsara indrindra eto an-tany..
Ity rafitra ity dia ahafahanao milalao amin'ireo mpandeha hafa fa tsy manohitra ny trano, Betfair dia tombony, satria tsy mila miahiahy momba ny vidinao ianao, fa mandoa vaomiera kely manasoa ny mpanjifany izy ireo. Fa ny tena zava-dehibe indrindra aminao ... dia ny fisian'ny tsena amin'ny fotoana mety tsara kokoa.
fanontaniana, Betfair, fa tsy amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny Bet365 na William Hill. Raha midika io ilay casino, Betfair dia manolotra karazan-javatra maro isan-karazany sy tolotra ary fampielezan-kevitra samihafa dia nokarakaraina ho mendrika ny mpanjifa.
varotra nentim-paharazana sy Paris
Betfair dia manolotra traikefa tsy manam-paharoa ho an'ireo mpampiasa azy, satria miasa toy ny filokana nentim-paharazana sy Paris ho ivon-tsena izany. Azo atao angamba ny mametraka Paris any a “trano” na manohitra ireo mpilalao olombelona hafa. Mandrakizay, Nanapa-kevitra ny hizara na hiova i Paris Cruz.
Mbola mihoatra noho ny 30 fanatanjahan-tena
farany, fa tsy kely indrindra, dia hanana fotoana malalaka hanadinoanao mihoatra ny 30 fanatanjahan-tena miainga amin'ny hetsika baolina kitra, Tenisy na baskety, izay malaza indrindra hoe hockey ranomandry, baolina, tenisy, billiards.
Betfair dia mandray soa ny mpanjifa vaovao miaraka amin'ny lalao filokana ara-panatanjahantena mety handresy 100 €, mizara ho dimy maimaimpoana ao Paris 20 € tsirairay. Amin'ny maha-mpanjifa fifaninanana ara-panatanjahantena, ianao dia manana fidirana amin'ny safidy momba ny 30 fanatanjahantena samy hafa.
Ho hitanao tsara ny fandrakofana amin'ny fanatanjahantena tena lehibe, nefa manana olana ara-politika ihany koa, anisan'izany ny olon-kafa, toy ny fihiondrika, Surf sy ny vidiny. Na dia nifantoka tamin'ny fanatanjahantena anglisy aza, ny tolotra ankehitriny dia feno tanteraka ary saika tsy any ivelany, nanangana Sports.
Fa ny baolina kitra no manana an'i Betfair tsara indrindra. Amin'ny fanatanjahan-tena lalao isafidianana marika amin'ny zoron-tany rehetra. Raha Betfair dia mifantoka indrindra amin'ny baolina kitra any Angletera, tamin'ity indray mitoraka ity dia tamin'ny ekipa mpilalao baolina kitra tamin'ny ankapobeny.
Ny tiantsika dia safidy fanatanjahan-tena tsara sy ny fiandohan'i Paris ... afaka mamorona fomban'andriana ianao Paris: Ao amin'ny ligin'ny mpilalao, ny isan'ny zoro amin'ny lalao baolina kitra na noforonina dia ekipa na mpilalao iray azo antoka kokoa.
Na dia mety tsy manana ny lafiny tsara indrindra eto an-tany aza ny tranonkala, dia tsara kokoa noho izy io. Ho hitanao saika isaky ny ligy, Mpilalao baolina kitra any Paris sy fifaninanana ara-pananahana; ary afaka manome toky anao aho fa tsy hahita fotoana tsaratsara kokoa ianao amin'ny fifanakalozana fifanakalozana an'i Betfair Soccer Paris.
Raha tianao ny miangona ao amin'ny Ligy Espana, fa koa any Bundesliga, Andian-dahatsoratra Premier sy italiana tsy misy fisalasalana… aroso ny hampiasana ny serivisy ao Betfair, izay mipetraka sy miasa any Paris ihany.
Paris mifaninana sy mahazo tombony mivantana
Tsenan'ny baolina kitra, Tenisy sy basikety Betfair no mifaninana tena amin'ny tsenan'ny filokana. Manana rafitra quota Turbo koa izy io, izay mety hanatsara ny filokana ara-panatanjahantena espaniola raha ambany ny taham-pidiny noho ny vavahadin-tserasera iraisam-pirenena hafa. Ary raha matetika dia mandray anjara lehibe amin'ny hetsika fanatanjahantena lehibe izy ireo.
Ny trano dia ahitana hetsika maromaro isan-karazany any Paris ihany koa. Paris amin'ny lalao na ny hazakazaka dia traikefa tsy tokony ho disoina.
mpiambina tsara indrindra
Betfair dia iray amin'ireo tarika Julio Maldonado 'Maldini”, mpanao gazety ara-panatanjahantena dia mpanohana ofisialy an'i FC Barcelona sy Arsenal any Paris Euroleague. Ny ankamaroan'ny kilasy an'izao tontolo izao. Tsy hahita referensi tsaratsara kokoa ianao raha hisafidy ny habetsahana. Fijery amin'ny efijery. Tsy mandeha fifaninanana i Betfair.
Betfair Sports manolotra lalao amin'ny lalao basikety isan-karazany any Paris. Afaka mahita ny zava-drehetra, avy amin'ny NBA tamin'ny ligy eropeana sy ny Euroleague, fa fifaninanana any Azia na Amerika Atsimo ihany koa. Ovay ny mora indrindra safidy, ny soso-kevitray dia ny mandeha any amin'ny rafitra ara-pifanakalozan'ny Paris Betfair amin'ny hetsika lehibe toy ny lalao Olaimpika, ny amboara eran-tany sy ny Euroleague Euroleague.
ny fomba fisoratana anarana
Raha mandeha any amin'ilay tranokala amin'ity trano ity ianao, ho hitanao fa eo amin'ny efijery fisoratana anarana ianao dia hampiditra ny mombamomba anao manokana (izay zava-dehibe ho marina), ny anaran'ny anarana, tenimiafina sy mailaka. Ny famoronana kaonty Betfair dia tena tsotra, dia mila fotoana ihany.